मकैसँगको तीन दशक | Epradesh Today
Homeफिचरमकैसँगको तीन दशक
तुलसीपुर, ३२ साउन । सडकमा दैनिक हजारौँ यातायातका साधन ओहोरदोहोर गर्छन् भने लाखौँको संख्यामा मानिसहरु पनि आवातजावात गर्छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–४ की अमृता विक पनि त्यहि सडकको छेउमा मकै पाल्छिन् । पोलेको मकै सडकमा आवातजावत गर्ने मानिसले खाने गर्छन् ।
सडकको छेउमा मकै पोल्ने व्यवसाय चलाउँदै आएकी अमृतालाई सडकमा कति मान्छे, कति सवारी साधन आउँछन् कुनै हेक्का नै हुँदैन्, हेक्का हुन्छ त केबल आज कति कमाउने, अहिलेसम्म कति कमाईयो ?
मध्यान्हको टन्टलापुर घाम होस् या वर्षायामको झरीमा पनि अमृता विक मकै पोल्नमै व्यस्त हुन्छिन् । रोजगारी भनेको जागिर नै हो भन्ने अहिले पनि अधिकांशको बुझाई छ ।
रोजगारीका अवसर नभएर भौतारिएका विभिन्न उदाहरण पनि भेट्न सकिन्छ । तर मन, वचन लगाएपछि सडक छेऊमै पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ, अर्थात् व्यापार गर्नका लागि ठूलो ठाउँ चाहिदैन्, ठूलै लगानी पनि चाहिँदैन् ।
यसैको ज्वलन्त उदाहरण भनेकी छन् । अमृता उमेरले साढे पाँच दशक पार गरिसकेकी छन् । उनले मकै पोलेर नै ४÷५ जनाको परिवारको जीवनलाई सहज बनाएको बताइन् ।
सानो लगानीमा पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भएपछि अमृताले मकै पोल्दै सडक व्यापार चलाएको बताइन् । काँचो मकै ल्याउनका लागि बिहानै गाउँमा पुग्ने र दिउँसो मकै पोलेर बिक्री वितरण गर्दै दैनिकी चलाउने विकलाई अहिले आर्थिकका लागि अरुकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छैन् ।
सानातिना गर्जो टार्नेदेखि लिएर मध्यम समस्या टार्न उनलाई सहज भएको छ । उनका अहिले ५ सन्तान छन् । ‘छोरीको विहेवारी भयो, एउटा छोरा पनि विहेवारी भयो, एउटा छोरा घरमै बस्दैन्,
एउटा छोरा पढ्छ’ उनले भनिन् ‘जेठो छोराले कहिलेकाहिँ सहयोग गर्छ, अरु त मैले कमाएको खाने हुन्, कान्छो छोरालाई पनि पढाउनुपर्छ ।’ अमृताले श्रीमानको पनि निधन भइसकेपछि सडक छेऊको सहारा बनेकी छन् ।
सडकमा अमृताले राम्रो आम्दानी त गर्नुभएको छ तर सडक छेऊ पनि भनेजस्तो सजिलो कहाँ छ र ? नजिकैको ठूला व्यापार गर्ने साहुजीले पनि अमृतासँग मेरो पसल नजिक किन बसेको भनेर दैनिक रकमसमेत असुल्ने गरिरहेको उनले दुखेसो पोखिन ।
‘हामीले नगरपालिकालाई पनि दिएका छौँ, पसलवालालाई पनि दिने गरेका छौँ केहि गरिसक्नु छैन्, जता पनि हामी गरि खान सक्दैनैँ’ उनले भनिन्
‘हामी गरिबहरुको सहारा भन्ने कोहि नै छैन्, दुनियाँ नै गरिबको दुःख पसिनामा बाँचेको जस्तो लाग्छ कहिलेकाहिँ त । उनले तुलसीपुरकै सडकमा तीन दशकदेखि मकै पोल्न थालेकी हन् ।
अमृताजस्तै तुलसीपुरकै सरस्वती विकले पनि मकै पोलेर नै आफुसहित ६ जनाको परिवारको दैनिकीलाई नै सहजरुपमा पालिरहेको बताइन् । श्रीमान बिरामी भएर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन्, छोरालाई पढाउनुपर्ने छ, यि सबै बाध्यतालाई सहज बनाएको भन्दै उनले दैनिक ५ सयदेखि ६ सयसम्म आम्दानी गर्ने गरेको बताइन् ।
‘आम्दानी गर्न मेहनत गर्नैपर्छ, कहिलेकाहिँ चर्को घाम र वर्षातको झरीको बेला समस्या हुन्छ, तर जे होस् आम्दानी भएकै छ’ उनले भनिन्
‘बुढा बिरामी भएर उनलाई स्यहार सुसार गर्नुपर्ने हुन्छ, छोराछोरी पढ्न थालेका छन्, यहि मकै बेचेर गुजारा चलाएको छु ।’ मकैको व्यापार गरेर नै जीवन चलाएकी सरस्वतीलाई सडक व्यापारको मोह हट्न सकेको छैन् ।